WordPress Nhare Yemusoro
Muvhuro, July 4, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vanhu vashoma vakataura nezve kunaka kwakaita bhurogu panharembozha. Parizvino tiri kutambira vashanu muzana yevashanyi vedu kuburikidza nharembozha… 5% pane iPhone yega.
Izvo zvakakosha kupa akasiyana mushandisi ruzivo nedhizaini ... kunyangwe iri kushandisa Onswipe yeakasarudzika iPad chiitiko - kana kushandisa WPtouch Pro ye mobile WordPress ruzivo pane iPhone, Droid kana zvimwe zvishandiso. Ongorora: WPtouch Pro zvakare inotsigira iPad… haina kungoita seyakaenzana neOneswipe.
Yakakosha sei nhare mbozha yaungabvunze? Zvinoenderana neyedu Analytics, nharembozha uye piritsi inoshanya yakwira 22.1% mwedzi pamusoro pemwedzi! Kushanya kwe iPhone kwakakwira 32.2% mwedzi pamusoro pemwedzi.
Izvi zvinoenderana nekutora nharembozha uye manhamba ekushandisa internet. Nharembozha email kuverenga iri kuwedzerawo… sekutengesa… ne vanopfuura makumi mashanu muzana evashandisi venhare vanotenga paIndaneti.
Makambani mazhinji anogona kumisidzana nekurasikirwa nekugadzirisa zvemukati zvemashandisirwo enhare… asi havafanirwe. Mazhinji emazuva ano zvemukati manejimendi manejimendi anokwanisa kushandisa nhare-yakatarwa madingindira kana machira echitaera. WPtouch Pro chete inodhura $ 39 pane saiti! Ungade here kuwedzera nhamba yako yevashanyi ne22% ne $ 39? Handina chokwadi nemakambani akawandisa asingade.
Tags: mobile wordpresswordpress nhareWordpress nharembozha pluginwptouchwptouch pro
Zvemagariro Midhiya - Kuvhara Gap